Badhan: Mudaaharaad looga soo horjeedo Somaliland; Is-rasaasayn aan cidi wax ku noqon oo dhex martay ciidanka Puntland & koox u dabaal degaysa xuska 18-ka May. – Radio Daljir
Badhan: Mudaaharaad looga soo horjeedo Somaliland; Is-rasaasayn aan cidi wax ku noqon oo dhex martay ciidanka Puntland & koox u dabaal degaysa xuska 18-ka May.
Badhan, May 19 – Is-rasaasayn aan cid wax ku noqon ayaa saaka ka dhacay magaalada Badhan ee xarunta gobolka Sanaag kaddib markii ay isku-dhaceen ciidamada maamulka gobolka Sanaag ee Puntland iyo kooxo u damaashaadayey xuska 18-ka May ee gooni-isu-taaga maamulka Somaliland.
Is-rasaaayntaan oo muddo cabbaar ah socotay ayaa bilaabatay kaddib markii ciidamada maamulka Puntland ee gobolka Sanaag ay isku-dayeen in ay kala eryaan dad damacsanaa in ay u dabaal-degaan sannad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay markii uu curtay hamiga gooni-isku-tagga ee Somalilind sannadkii 1991.
Iska-horimaadka oo ka bilawday xaafad ku taalla dhinaca galbeed ee magaalada Bardhan ayaa markii danbe soo xoogaystay, waxaana magaalada laga saaray kooxdii wataday damaca dabaal-degga ee Soomaaliland iyadoo laga joojiyey qorshahoodii damaashhaad sida uu Daljir u sheegay guddoomiyaha gobolka Sanaag ee Puntland Maxamuud Siciid Nuur ‘Dabayl’
Md. Dabayl waxaa uu sidoo kale sheegay qorshahaani in uu ahaa mid in muddo ah maamulka Somaliland uu waday laguna damacsanaa xaflado dabaal-deg in laga sameeyo Badhan, hase-ahaatee maamulkiisu ay arrintaasi dadaal-dheer u galeen kana hor-tageen.
Md. Dabayl ayaa maamulka Somaliland uu ku eedeeyey in ay hurinayaan arrimahaan, gacanna siiyaan Sh. Maxamed Siciid Atam iyo kooxda uu maamulo si aan marna xaalad-deganaansho iyo mid nabadeed loo helin.
Dhinac kale, waxa saaka iyana ka dhacay magaalada Badhan mudaaharaad looga soo horjeedo Somaliland iyo fara-galin la sheegay in ay ka waddo gobollada Puntland ee xiga dhinaca Waqooyi kuwaasi oo ay soo abaabuleed dadwaynaha magaalada Badhan.
Cabdifataax C Geeddi,